स्वप्निल साहित्य: रातो धर्का
Posted by स्वप्निल स्मृति at 7:14 AM
Nar Limbu June 29, 2012 at 12:47 AM
सस्मरणमा स्वप्निलजीकैपनी संघर्शको कथा पढन/जान्न पाइयो । उत्पिडन त साएद आदिम साम्यवादमा मात्र अन्त होला । तर अहिलेको जस्तो 'अमानविय' उत्पिडन रहिन्जेल विद्रोहको आगो लागिरहने छ । सपना देखाउन क्षमता राख्ने कृष्ण सेन 'इछुक' र उत्पिडनको भोक मेटाउन सपनाको पछी कुद्ने स्वप्निलहरु जन्मिरहने छन् र सही दिशा नपाएपछी 'भक्तपुरे' मा अनुवाद हुने छन् । यो क्रम उहिलेदेखी अहिले सम्म चली रहेछ । आशा गरौं अब त्यस्तो हुने छैन ।
Makum मकुम August 2, 2012 at 2:17 PM
म चाहिँ जनादेशको छैटौँ पृष्ठमा छापिने कविता र गीतमा विष्फोट हुन्थेँ । सानोमा बैरागी काइँलाका कविता पढेकोले जनादेशका कविता मेरो लागि ‘एम्बुस’ नै थियो, छोयो कि पड्किहाल्ने । मलाई थाहा छैन, नेपाली साहित्यका पण्डितहरुले जनयुद्धकालीन कविताहरुलाई कसरी लिइरहेका छन् ! After reading really... I'm chocked. thaks